MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: BOMB BURMA? (POEM)
BOMB BURMA? (POEM)
ခွဲ...ခွဲ နိုင်လွန်း ။
ဒီမိုသမားလည်း ညည်းချင်းသာပွား ။
အစွပ်စွဲခံရသူလည်း ခံရပေါ့ ။
သတ္တိဆိုတာ အတိအကျ သတ်တာကို ခေါ်သလား
မီးစင်ကြည့်ကြည့်ပြီး 'က' နေရတာ
(Poem Photo - www.ehow.com/how_2142060_deal-bomb-threat.html)
Posted by Nyo Gyi at 21.10.08
Free DAW AUNG SAN SU KYI Now !!!